आस्थाको तर्फबाट म माफी माग्छु – Khabar Silo
आस्थाको तर्फबाट म माफी माग्छु
हरिबहादुर केही बेचैन छन् यतिबेला । सिक्किममा रहेकी उनकी छोरीलाई फर्कनेवित्तिकै पक्राउ गर्ने भनेर प्रहरी तम्तयार बसेको छ । आस्थाको विषयमा धेरैथरि टिप्पणीहरु सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् ।
अनलाइनखबरसँग अन्तरवार्ता दिने क्रममा हरिबहादुरले आफ्नो आँसु थाम्न सकेनन् । निकैबेर उनको गला अवरुद्ध भयो । उनले बारम्बार हात जोडेर बिन्ति गरे, ‘कृपया तिललाई पहाड नबनाइदिनुस, मेरी छोरीबाट कुनै गल्ति भएको भए म माफी माग्छु ।’
त्यस दिन घरबाहिर थिए, हरिबहादुर राउत । छोरी आस्था सांगीतिक कार्यक्रमका लागि सिक्किम जाने कुरा थाहा थियो उनलाई तर आ-आफ्नो व्यस्तताले खासै कुराकानी हुन पाएको थिएन ।
आस्था प्रायः देशभित्र र बाहिर हुने सांगीतिक कार्यक्रममा हिँडिरहने भएकाले आमाबुवालाई छोरी घरमा नहुनु कुनै नौलो कुरा हुँदैन । कहिलेकाहीँ त आस्थाले बुवाआमालाई भन्न पनि भ्याउँदिनन् । एक ठाउँबाट फर्केलगत्तै अर्को ठाउँ पुग्ने हतारो हुन्छ ।
‘छोरी विदेश गएकी छ कि देशभित्रकै कार्यक्रममा गएकी छन् भन्ने कुरा उनको सुटकेश हेरेर थाहा हुन्छ,’ हरिबहादुर भन्छन्, ‘विदेश गएको बेला सानो सुटकेस घरमा हुन्छ । स्वदेशभित्रै छन् भने ठूलो सुटकेश घरमा हुन्छ ।’
माघ १ गते आफ्नो सानो सुटकेश घरमा छोडेर हिँडेकी थिइन् आस्था । उनी घरबाट निस्कँदा बुवा-आमा दुवै बाहिर थिए ।
हरिबहादुरलाई बेलुकीतिर एक चिनजानका पत्रकारले फोन गरे । उनले आस्थाको फेसबुक लाइभ हेरेका रहेछन् । एयरपोर्टमा यस्तो भएछ भनेर पत्रकारले सुनाउँदा सुरुमा त राउतले त्यति ठूलोरुपमा लिएनन् । तर, त्यसपछि फोनको घन्टी लगातार बज्न थाल्यो ।
हरि भन्छन्, ‘दिनभर म बाहिर काममा थिएँ । फेसबुक हेरेको थिइनँ । अरुको फोन आएपछि मात्र पत्तो पाएँ ।’
हरिले मोबाइलमा फेसबुक खोलेर हेरे आस्थाको भिडियो, जुन त्यतिबेलासम्म सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेको थियो । साथै, आस्थाको विषयमा नानाथरि प्रतिक्रियाहरु पनि आइरहेका थिए । हरिबहादुरको चिन्ताको पारो बढ्यो ।
आस्थाको लाइभ भिडियोका बारेमा उनी भन्छन्, ‘मेरी छोरी हक्की स्वभावकी छ । अन्याय सहनै सक्दिन । उसको पेटमा पाप छैन । पक्कै केही नराम्रो व्यवहार भयो होला र नै त्यसरी आवेशमा आइ । तर, शब्दचयनमा केही त्रुटि भएकै छ ।’
विवाद बढ्दै जाँदा प्रहरीले एयरपोटभित्रैको सीसीटीभी फुटेज बाहिर ल्याइसकेको छ । यसमा जनमत विभाजित छ । कसैले आस्थाप्रति सहानुभूति दर्शाएका छन् त कसैले उनको आलोचना गरेका छन् । धेरैले चाहिँ दुवैको गल्ति औंल्याइरहेका छन् । हरिबहादुरलाई के लाग्छ ?
उनी भन्छन्, ‘सीसीटीभीको भिडियोमा दृश्य मात्रै छ, आवाज छैन । त्यसैले यो हेरेर मात्रै को दोषी हो भनेर निर्क्यौल गर्न कठिन हुन्छ । तर, म यतिचाहिँ भन्न सक्छु कि प्रहरीबाट गलत बोली-वचन नभएको भए छोरीले बिनाकारण त्यसरी आक्रोश पोख्ने थिइन । केही न केही गल्ती दुवैबाट भएको छ ।’
उनी थप्छन्, ‘गल्ती दुवै तर्फबाट भएका होलान् । तर, सत्य बोल्न पाउनुपर्छ सबैले । यदि बोल्नै डराउनु पर्ने भयो भने त पञ्चायतकाल र अहिलेमा के फरक भयो र ।’
प्रहरी अनुसन्धानको विषय भएकाले धेरै बोल्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘प्रहरीले आस्थालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । अब छलफल होला, अनि सत्यतथ्य आउला । त्यसैको प्रतिक्षा गरौँ ।’
प्रहरीले आस्थालाई पक्राउ नै गर्ला भन्ने चाहिँ उनलाई लागेको छैन ।
हरिबहादुर भन्छन्, ‘प्रहरीसँग धेरै ठूला-ठूला जिम्मेवारी छन् । हत्या, बलत्कारका ठूला अपराधिहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । बोल्दा केही गल्ति भयो भनेर सिंगो प्रहरी मेरी छोरीलाई जेलमा हाल्न तयार हुँदैन होला ।’
अहिले केही मिडियाले पनि तिललाई पहाड बनाएर समाचार सम्प्रेषण गरेको हरिबहादुरको दुखेसो छ । खासगरी ‘आस्था राउत फरार’ भनेर लेखिएका समाचारहरुले उनको मन दुखाएको रहेछ ।
उनले भने, ‘मेरी छोरी सांगीतिक कार्यक्रमका लागि सिक्किम गएकी हो भनेर सबैलाई थाहा छ । उसले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनिरहेकी छ । केही दिनमा कार्यक्रम सकिएपछि फर्किहाल्छे । यदि प्रहरीले आइहाल्नुपर्छ भन्यो भने कार्यक्रम छोट्याएर पनि आउँछे । अनि, उसलाई कसरी भागेको वा फरर भन्न मिल्छ त ? प्रहरीले जे भन्यो मिडियाले पनि त्यही लेखिदिने ?’
आस्थाले यो आफ्नो केही गल्ती महसुस गरेर नै माफी मागेको हरिबहादुरको भनाइ छ ।
‘बाहिर अलिकति कडा देखिए पनि उसको मन कोमल छ । चाँडै भावुक हुन्छे । हामीसित फोनमा कुरा गर्दा पनि धेरै रोएकी छ । नेपाल फर्केपछि प्रहरीमा गएर आफ्नो कुरा राख्छु भनेकी छ,’ हरिबहादुरले भने ।
यो विषयलाई प्रहरीले मुद्दा-मामलामा लगेको उनलाई त्यति चित्त बुझेको छैन ।
‘दुवै पक्ष बसेर आपसी छलफलमा कुरा मिलाउनु सकिने कुरा हो । यस्तो विषयलाई चर्काउँदा सबैलाई घाटा हुन्छ । भ्रमण वर्ष मनाइरहेको बेला देशलाई नै घाटा हुन्छ । आखिर कलाकारले पनि त देश विदेशमा भ्रमण वर्षको प्रचार गरिरहेका छन् ।’
हरिबहादुर र सावित्री राउतकी एक्ली सन्तान हुन् आस्था । २०४१ सालमा हरिबहादुर र पवित्राको विवाह भएको थियो भने त्यसको ४ वर्षपछि आस्था जन्मेकी थिइन् ।
त्यतिबेला ४-५ जना सन्तान जन्माउने चलन थियो । सरकारले चाहिँ ‘दुई सन्तान ईश्वरका बरदान’ को नारा अघि सारेका थिए । तर, हरिबहादुर दम्पत्तिले भने एउटै सन्तानमा चित्त बुझाए ।
‘छोरा भए पनि छोरी भए पनि एउटा मात्र पाउने हामीले पहिल्यै तय गरेका थियौं । हामी समाजलाई पनि एउटा सन्देेश दिन चाहन्थ्यौं ।’
घरको एक्लो सन्तान भएपछि माया त अवश्य बढी भइहाल्छ । कतिपय एक्लो छोरा-छोरीहरु बुबाआमाको मायाले पुल्पुलिने गर्छन् र त्यसको प्रभाव उनीहरुको स्वभावमा पर्छ । आस्थाको विषयमा पनि कतिपयले यस्तै ठान्छन् ।
तर, आफ्नी छोरी बाहिर भनिने जस्तो घमण्डी वा जिद्दी स्वभाव नभएको हरिबहादुर बताउँछन् ।
उनले भने, ‘माया त गरिन्छ नै, तर अनुशासन पनि सिकाएका छौं । उसको कमजोरी यत्ति हो कि मनमा एकथोक र मुखले अर्कोथोक गर्न सक्दिनँ । कसैको ज्यूहजुर गर्ने उसको स्वभाव छैन ।’
‘यहाँ कतिपय कुराहरु सिधासिधा भन्दा धेरैलाई अपाच्य पनि हुन्छ । त्यसैले कूटनीतिक वा घुमाउरो तरिकाले बोल्नुपर्ने हुन्छ । उसले त्यसरी बोल्न जान्दिन । नबिराउनु नडराउनु भन्ने छ उसको आदर्श ।’
आस्थाले जस्तोतस्तो गीत गाउँदिनन् । कुनै पनि गीत गाउनुपूर्व बुवा आमासँग सल्लाह लिने गर्छिन् । शब्द चित्त बुझेपछि मात्रै गाउन तयार हुन्छिन् ।
हरिबहादुर भन्छन्, ‘हाम्रो त घरभित्रै सेन्सर बोर्ड छ । हामी तीन जनाको सेन्सर बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्रै आस्थाले गाउँछिन् । उसलाई प्राय राष्ट्रियता जोडिएका सन्देशमुलक गीतमा रुचि छ ।’
नेपाली संस्कृतिसँग नसुहाउँदो गीतबाट आस्थालाई टाढा राखेको हरिबहादुर बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘बरु आधा पेट खाइन्छ । तर संस्कृति भुलेर बनेका गीतहरु गाइँनन् । आस्थाले छोडेका धेरै गीत छन्, जुन हिट भएका छन् ।’
आस्थाले अहिले मास्टर्स गरिरहेकी छिन् । उनको विषय आमसञ्चार र पत्रकारिता हो । पत्रकारिता र पर्यटनमा आस्थालाई विशेष रुचि भएको हरिबहादुरले बताए ।
डेढ साताअघि पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना सानेपा हाइटस्थित घरभित्रै मृ”त फेला परिन् । घटना अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका केही नयाँ तथ्यसहित प्रहरीले विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ग’म्भीर प्रश्न छ – कामदार विजय एक्लैले त्यो काम कसरी गरे ? नाइलनको पा”’सो लाग्दा डो”’री चुँ’डिई भुँ’इमा ब’ज्रि”एर विजयले प्रा’ण त्या”गे भनिएको छ । सबैभन्दा ग”म्भीर […]
एमसीसी अनुमोद हुन्छ : मन्त्री ढकाल